Shirkii 12-aad ee golaha imaamyada oo soo gabagaboobay iyo bayaan kasoo baxay | Majliska.org
Sadex dii bari ee lasoo dhaafay September 6-8, 2013 ayaa shir uga socday Golaha Imaamayada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika Magaalada Minneapolis, Xarunta way nee Abuubakar As-Saddique Islamic Center. Shirkaas ayaa ahaa shirkii 12-aad ee xubnaha shuurada iyo tanfiidka isugu yimaadaan sanad kasta mar.
The North American Council of Somali Imams, loona soo gaabiyo (NACSI) ayaa ah magaca hay’adan aan macaash raadiska ahayn marka English loo turjumo, NACSI waa gole ay ku kalan sanyihiin in kabadan 21 Masaajid/Maraakis oo ku yaala dalka Maraykanka dhamaantoodna ay gateen, dhisteen, kiraysteen Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool Maraykan ka. Maraakistaas ayaa u dhaxeeya qaar ku fadhiya qiimo ahaan inta u dhaxaysa $200.000 – $5.000.000 (laba boqol oo kun ilaa shan milyan oo doolar) dhamaantoodna marka la isu geeyo hantida gashay waxaa lagu qiyaasaa in ka badan $60.000.000 (lixdan Milyan oo doolar)
Shirkaan sanad laha ah ayaa marba diirada saara arimaha markaas taagan iyo kuwa mustaqbalka dhow soo aadan ee khuseeya ummadaha muslimiinta iyo gaar ahaan mushtamaca Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka.
Sanadkan ayaa shirku xooga saaray sidii loo baraalin lahaa hay’ada NACSI dhinac kasta oo ay noqoto, haday ahaan lahayd dhinaca shaqaalaha, dhaqaalaha, maraakista cusub ee kusoo biiraya, Siminaarada iyo tababarada uu siinayo imaamyada, maamulayasha maraakista, macalimiinta dugsiyada iyo waxqabad ka kale eeee xaqiijinaya ahdaafta Majliska loo agaasimay. Maalinkii Sabtida ahayd intiisii bad naydna waxaa shirku xooga saarayey arimaha horumarinta Golaha Imaamyada Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika.
Sidoo kale shirku wuxuu xooga saaray sidii Masaajida kale ee aan golahan ku jirin ay uga mid noqon lahaayeen, gaar ahaan waxaa laga hadlay Masaajida Canada, lana ansixiyey in lagu soo daro golahaan.
Halkan ka akhir: Baaq kasoo baxay golaha imaamyada shirkoodii 12-aad ee 2013.pdf
Maalinkii labaad ee shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay Sh. Abdirahman Sh. Cumar oo Soomaaliya kasoo noqday, Sh. Abdirahman waa gudoomiyaha golaha Shuurada ee NACSI. Sheikh Abdirahmaan ayaa war bixin dheer ka bixiyey safarkiisa uu Soomaaliya kaga soo noqday, isagoo xusay inuu isbadal wayn u dhexeeyo safar kiisaan iyo kii ka horeeyey, dhinaca nabada iyo horumarka ee Magaalada Muqdisho. Sheikha ayaa ka mid ahaa xubnihii lagu casumay shirkii waxbarasha ee Dowladu Muqdishu ku qabatay, wuxuuna xusay inuu ahaa shir Soomaalidu u madax banaan tahay, ayna gacanta ku hayeen dad aqoon iyo karti u leh howsha waxbarasha .
Shirka ayaa aad looga dareemay Magaalada Minneapolis, maadaama culimo badan kasoo qayb galeen, kuwaas oo nasiib u yeeshay inay Masaajida gobolka Minnesota ka jeediyaan, khudbooyin iyo muxaadaraad isdaba jog ah, dadka reer Minnesota ayaa muujiya marka ay arkaan kulamada noocaan oo kale ah farxad iyo soo dhawayn.
Ugu danbayntii ayaa shirka laga soo saaray baaq loo jeediyey ummada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan dal iyo dibadba, baaqaas oo ka koobnaa sideed qodob waxaa ku saxiixnaa Sh. Abdirahman Sh. Omar, waxaana goobta ka akhriyey Sh. Yusuf Abdulle oo ah xoghayaha golaha Shuurada ee Majliska. Hoos ka akhriso nuqulka baaqa. Xasan Dhooye, Minneapolis, MN